Genshin Impact: Maitiro ekuwana Primogems | la-manette.com
Genshin Impact: Maitiro ekuwana Primogems
12 novembre 2021 ndima JEAN-MICHEL CAPPIN
Primogems ndeimwe yemari huru ye Genshin kukanganisa. Zvechokwadi, unogona kutenga zvinhu neStardust, Star Glitter, uye Mora, asi zvinhu zvinotonhorera zvinogona kutengwa chete neVakadzi Vokutanga.
Zviri nyore pane zvaungafunga kuisa maoko ako paPrimogems, kana pakutanga kwemutambo.Asi huwandu huripo hushoma, kunyanya paunofambira mberi kuburikidza nemutambo.
Saka ramba uchiverenga kuti uzive kwaungawana Primogems uye zvekuita kana iwe uri pakupera kwemutambo.
Related : Genshin Impact yekuburitswa zuva - ichave iripo riini paNintendo Shandura?
Ini ndinowana sei Primogems muGenshin Impact?
Pane zvikonzero zviviri zvakakosha nei uchida akawanda Primogems sezvinobvira. Iwo anoshandiswa kudzoreredza Yekutanga Resin uye kutenga Fates uye Wishes. Chokwadi, unogona kutenga zviperengo zvine stardust uye stardust, asi hazvina kuwanda semaprimogems mumutambo.
Pane nzira nhatu huru dzekuisa maoko ako paPrimogems:
1. Kuongorora nyika
Paunenge uchiongorora nyika, uchasangana nemhando dzakasiyana dzezvipfuva. Zvipfuva zvakajairwa muTeyvat kazhinji zvine zvakapambwa zvakaderera, senge zviwanikwa zvekudya. Zvipfuva zvepamusoro, zvakadai seExquisites, zvinogona, zvisinei, zvine zvishoma zvePrimogems zvakagadzirira kutorwa.
Imwe nzira yekuwana mamwe maPrimogems kutsvaga Waypoints. Kuvhura aya anokurumidza mafambiro ekufambisa kazhinji haawane akawanda ePrimogems, asi mashoma Primogems ari nani pane asina.
2. Login bhonasi “Pinda zuva
Nguva nenguva vagadziri vemutambo vanofarira kuwedzera mabhonasi emazuva ese anopa mubayiro vatambi - wazvifungidzira! - Primogems. Hazvisi zvechigarire, asi zvinoitika kazhinji zvakakwana zvekuti unotarisa peji rezviitiko pese paunopinda kuti usarasikirwe.
3. Pedzisa mishoni
Mazuva ese Makomisheni anogona kutora chunk yakakura yemitambo yako yemitambo, asi kana iwe uchitsvaga Primogems ipfungwa yakanaka kuvawedzera. Aya mamishini, pamwe nedivi uye nyika quests, mukana wakanaka wekukohwa mibairo mikuru, kusanganisira Primogems.
Unogona kutarisa kana paine chero Mudzimai wekutanga mibairo yekupedzisa imwe mishoni nekutarisa Journal. Inoratidza mibairo inobvira pasi petsananguro yemishoni.
Uye zvakare, nekuwedzera yako Adventure Rank uye kupedza ongororo, unogona kuwana mashoma Primogems pachitsauko chimwe nechimwe chaunopedza. Pese paunovhura chipfuva kana kuwana muvengi mutsva, une mukana wekuwana ruzivo mapoinzi uye kupedzisa rimwe rematambudziko akanyorwa muAdventurer's Manual.
Heano dzimwe nzira dzekutora primogems:
Mibayiro inotumirwa neemail kune server nyaya kana zviitiko zvakakosha.
Nekuvatsinhanisa neStardust kana Stardust muPaimon Vatengesi.
Nekudzikinura makodhi eGenshin Impact anoshanda.
Kana iwe uchida kuvaka yako stash yemaprimogems uye uine mari yekushandisa, unogona zvakare kutenga coin mapaketi anosanganisira primogems, seWelkin's Ropafadzo yeMwedzi. Iyi $ 4,99 inogona kudzokororwa paki inosanganisira 2 Primogems, asi kugoverwa kunopararira kwemazuva makumi matatu uye haapihwe ese kamwechete. Iwe unogamuchira 700 primogems pachine uye unogona kutenga chikomborero ichi kusvika ka30, kwehuwandu hwe300 mazuva ebhonasi. Izvi zvinoreva kuti iwe uchagamuchira 6 Primogems pazuva pese paunopinda, kune yakazara ye180 Primogems.
Verenga zvakare: Splatoon 2: matipi uye matipi - maitiro ekutamba online neshamwari
Kana iwe uchingofarira kutenga Primogems pasina kupinda mukati memazuva ese, une rombo rakanaka. Unogona kutenga Genesisi Makristasi uye kuchinjanisa navo Primogems. Iyo 1: 1 kutengeserana, 1 Genesis Crystal yakakosha 1 Primogem.
Heino rondedzero yemitengo iripo yekutenga kweGenesis Crystals.
60 Genesis Makristasi - € 0,99.
300 Genesis Makristasi - € 4,99
980 Genesis Makristasi - € 14,99
1980 Genesis Makristasi - $29.99
Genesis 3280 Makristasi - € 49,99
6480 Genesis Makristasi - € 99,99
Related : Genshin Impact Leakers vari kusiya Twitter, Huchi Impact yakavharwa.
Nzira yekukurumidza kuwana Primogems muGenshin Impact?
Iyo inokurumidza nzira yekuwana Primogems kana iwe uchangotanga mutambo ndeyekupedzisa Prologue uye nekutsvaga ari pedyo Waypoints uye Statues yevanomwe. Iwe unogashira primogems nekupedza zvidzidzo, iyo Prologue mishoni, uye kuwana nzvimbo nyowani.
Dzimwe nzira dzekutora Primogems nekukurumidza ndedzinotevera:
Pedzisa zuva nezuva makomisheni
Tsvaga uye udzikinure Genshin makodhi makodhi.
Vagamuchire neemail mumutambo
Makomisheni ezuva nezuva anongowana mashoma ekutanga panguva, asi anowedzera nekukurumidza uye ndeye yakavimbika uye yekusingaperi sosi yerudzi urwu rwemari.
Iwo macode akatinetsa kuwana nekuti vagadziri vemutambo vanozeza kuvapa. Zvisinei, kana iwe ukawana imwe inoshanda, unogona kutarisira kuwana chero kupi zvako kubva ku30 kusvika ku100 Primogems per code.
Ini ndinowana sei Primogems muGenshin Impact pakupera kwemutambo?
Sezvo iwe uchiswedera kumagumo emutambo, iwe uchaona kuti maPrimogems ari kuwedzera uye mashoma. Vaenda kupi uye ndowana sei zvimwe?
Zvinoita sekuti vagadziri vemutambo vachengetedza vatambi vatsva nekuita kuti Primogems ive pakati pemibairo yese paunotanga mutambo.Vanotarisira kuti unofamba nemavari usingazive kuti Primogems ichave isingaite sei. gare gare mumutambo. Izvi hazvireve kuti vatambi pa kupera kwemutambo kwapera.
Tsvaga kuti ungawana sei Primogems, kunyangwe padanho repamusoro remutambo:
1. Komisheni yezuva nezuva
Unogona kuwana Primogems nekuzadzisa Daily Komisheni. Aya mamishini ezuva nezuva anofanirwa kunge ari imwe yenzira dzako huru dzekuwana Primogems sezvo iwe uchigona kukwira kusvika makumi matanhatu ematombo pazuva uye haufanirwe kubhadhara kana dime.
2. The Gouffre
Mushure mekusvika paAventure Rank (AR) makumi maviri, iwe unowana mukana weiyo Spiral Chasm. Iri gomba rakakosha rinopa vatambi vanosvika mazana matatu ePrimogem pauriri kana ukakwanisa kupedzisa ne20-nyeredzi chiyero. Iyi inzvimbo imwe chete, asi inzira yakanaka yekukurumidza kuwana akawanda ePrimogems kana iwe ukapinda mune iyi dambudziko rakagadzirirwa.
3. Wana mabasa
Kupedzisa kubudirira ndeimwe nzira huru yekuramba uchiwana Primogems mumutambo wese, kunyangwe kunonoka mumutambo, sezvo paine mazana azvo aripo. Iwe hausi kuona mazana ePrimogems akapihwa pakupera, asi mashanu kusvika makumi maviri aunogamuchira anowedzera nekukurumidza.
Verenga zvakare: Hautauri mutauro wacho. Heano maitiro ekushandisa Google Translate.
Related : Kubata Hove muImpact Genshin: Hove Respawn Nguva Yekutungamira
Nzira yekuwana sei Primogems yemahara muGenshin Impact?
Pane nzira shoma dzekuwana Primogems pasina kushandisa dime, asi zvinotora nguva. Kana izvi zvichiita sekunakidza kwauri, tarisa pane zviitiko zvakaita se:
Pedzisa mibairo uye nyaya huru
Tsvaga zvipfuva, nzira, nzvimbo dzinoyera uye zvidhori zvevanomwe.
Iwe unogona zvakare kugamuchira yakakosha chipo kubva kune vanogadzira mutambo kana iwe wasvika mamwe matanho eiyo Adventure renji. Semuenzaniso, vamwe vatambi vakagamuchira 50 kusvika ku100 maprimogems ekusvika AR 20 ne25.
Iwe unogona zvakare kutevera zviitiko zveMiHoYo pasocial media kana maforamu epamutemo. "Mahara" Primogems anogara achikwira sechikamu cheimwe yemakwikwi avo akawanda uye zviitiko.
Nzira yekukurumidza kuwana Primogems muGenshin Impact muF2P?
Semutambo wemahara-yekutamba (F2P), Genshin Impact inoteedzera fomula yakafanana neiyo yakauya pamberi payo. Iwe haufanirwe kushandisa mari kubva muhomwe yako kutamba, asi vanogadzira havaite kuti zvive nyore kuwana mu-mutambo mari zvakare.
Kana iwe uchitsvaga nzira dzekuwana Primogems nekukurumidza, tarisa pane mbiri nzira huru: Daily Commissions uye Achievements.
Aya maviri masosi anogona kusaburitsa akawanda ePrimogem ega, asi anogona kuwedzera nekukurumidza kana iwe ukaisa iyo nguva zuva nezuva.
Related : Genshin Impact: Maitiro ekutamba neanodzora pane nharembozha
Ini ndinowana sei Primogems muGenshin Impact pakutanga kwemutambo?
Pakutanga kwemutambo, nzira iri nyore yekuwana Primogems ndeyekupedzisa Prologue kuda uye zvidzidzo. Tarisa pakutsvaga Waypoints, Shrines uye Zvidhori zvevanomwe, pamwe neakakosha chipfuva nemakomba kuti uwane Primogems. Kana makomisheni ezuva nezuva aripo, ita tsika yekuazadza pese paunopinda mumutambo zvakare.
Nzira yekuwana sei Primogems muGenshin Impact neHack?
Zviri kuyedza kubaya mitambo yakaita seGenshin Impact kuti uwane yakawanda mu-mutambo mari, asi chenjera kana ukadaro. Izvi zvinotyora zvirevo zvechibvumirano chemutambo uye kana ukabatwa unogona kupedzisira wavharirwa account kana kumiswa.
Uyezve, Genshin Impact ine anti-cheat software inoshanda kumashure paunenge uchitamba. Iyo software inoita kuti zvisaite kubiridzira pasina kuwanikwa, saka kana ukafunga kuedza, yeuka kusashandisa yako yekutanga account.
Related : Iwo gumi neshanu akanakisa spy mitambo, maererano neMetacritic
Chii chinonzi Primogems muGenshin Impact?
Primogems ndeimwe yemari huru yeGenshin Impact mutambo. Iwo anoshandiswa kuchajazve Original Resin uye kutenga Wishes uye Fates yemutambo's gacha system.Vatambi vazhinji vanoshandisa matombo anokosha kune ekupedzisira sezvo iriyo nzira huru yekuwana vatambi nezvombo. premium mumutambo.
Ndekupi kushandisa primogems muGenshin Impact?
Unogona kuchinjana Primogems muPaimon's Bargains mu-mutambo chitoro cheAnowanikwa uye Akapindirana Fates. Mafaro aya anobva ashandiswa kugadzira “zvishuwo” mumutambo weGacha-style system yezvombo zvitsva nevatambi. Iwe unogona zvakare kushandisa Primogems pane chishuwo skrini kana iwe usina zviperengo zvakakwana kuti upedze dhirowa.
Verenga zvakare: MAZANO EKUNHUTSA FIFA 19
Iwe unogona zvakare kushandisa Primogems kudzoreredza Yekutanga Resin kuti idzore simba / kusimba, asi vatambi vazhinji vanoiona sekuparadza kweiyi yakaoma-kuwana-kuwana mari.
Nzira yekuwana sei emahara primogems muGenshin Impact?
Primogems anowanzo kupihwa semubairo weakapedzwa quotes, mishoni, nemakomba. Pamusoro pezvo, iwe unogona kuwana Primogems nekuvhura zvipfuva, kuwana akakosha mamaki, uye kusvika kune chaiwo maAR mamestone.
Nzira yekugaya sei muGenshin Impact?
Mumitambo, kukuya kunowanzoreva kudzokorora mabasa kuti uwane mapoinzi echiitiko (kana XP). MuGenshin Impact, izvi zvinoreva kuwana XP kufambisira mberi yako Adventure Rank. Iwe unogona kuwana yakawanda XP nekupedza mabasa akadai se:
Ita mupiro uye fungisisa pamberi pechifananidzo cheVanomwe.
Pedzisa mitsva yenyaya
Tarisa mabasa ari muAdventurer's Handbook.
Vhura waypoints uye shrines
Maitiro ekuwana mafates muGenshin Impact?
Pakutanga kwemutambo, kana wapedza iyo Prologue quotes, iwe unogashira chipo chakakosha kubva kune vanogadzira nenzira yezviperengo zvakakwana kuti zvishuwo zviitike. Zvadaro, maFates ari mashoma mashoma.
Iwe unogona kuchinjana mu-mutambo mari yeFates kuVatengesi muPaimon uye dzimwe nguva unovagamuchira semubairo wekupedzisa quotes. Nekudaro, iwe hauwanzo gamuchira Fates semubairo, saka usavimbe nawo sewako sosi yekutanga.
Pane kudaro, tsvaga zviitiko zvakakosha zvemutambo. Apa ndipo pauchave nemikana yakawanda yekuwana Fates, sezvo vagadziri vachida kuti iwe ude hunhu hutsva.
Unganidza uye chengetedza yako primogemmas
Primogems inogona kuita semari yakawanda paunotanga mutambo, asi inoshomeka nekukasira paunenge uchifambira mberi nenyaya. Saka chenjera zvaunoshandisa nekuti zvinogona kutora nguva kuti uzvitsive, kunyanya kana usingade kuvhura chikwama chako kuti udaro.
Ndeipi nzvimbo yako huru yekuzvarwa kwekutanga? Tizivise muchikamu chemashoko pazasi.
Garena Yemahara Moto dhizaini makodhi anhasi, Mbudzi 11: nunura ichangoburwa Yemahara Moto mibairo.
Maitiro ekuita Pluto TV